Kpido: wp_footer | Martech Zone
Site na saịtị ọhụrụ ahụ, achọrọ m ụlọ mmanya maka WordPress ogologo oge. Ebumnuche isiokwu ikpeazụ anyị nwere n'ezie ngalaba niile enwere ike ịkwatu nke kpọsara ndenye aha email anyị. Nke a mere ka ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha mụbaa nke ukwuu nke mere na etinyegoro mbanye ndebanye aha ozugbo na isi isiokwu ahụ. Ugbu a, achọrọ m ka ogwe osisi dị elu iji mee ka ndị na-agụ ya mara ụbọchị ọ bụla ozi igodo anyị
Anọ m na-eme ọtụtụ echiche n'oge na-adịbeghị anya ma soro nwa m na-ede uri na ndụ, ịzụ ụmụ, ọrụ, mmekọrịta, wdg. Ndụ na-abịakwute gị na nkebi ma a manyere gị ime mkpebi ndị ị na-achọghị. Nkeji 1: Alụmdi na nwunye Ihe dị ka afọ asatọ gara aga, ọ bụ alụkwaghịm m. Ekwesịrị m ịchọpụta ma m̀ ga-arụli ịbụ nna ‘ngwụsị izu’ ka ọ̀ bụ na o nweghị. M họọrọ nke abụọ n'ihi na enweghị m ike